Umlingisi weBhokisi yeTshayina yeTshayina / uMatshini weBCT kunye neFektha | I-TST
Umvavanyi weBhokisi yokucinezela / umatshini weBB
TST Box ucinezelo Tester machine
TSF-Z001A Box ucinezelo Tester machine
Umatshini wovavanyo lokuvavanywa, umatshini wokuvavanywa kwebhokisi
Uvavanyo lweBhokisi yokucinezelwa kweBhokisi
Lo matshini usetyenziselwa ukulinganisa imeko yokuthwala ngexesha lokuhambisa ibhokisi, njengokugcina impahla, ukuhambisa. Kwaye ufumane ukuba i-carton inokukhusela imveliso yangaphakathi ngovavanyo lokucinezelwa.
Lo matshini ulinganisa istaki esisebenzayo kunye nokuthuthwa kwenqanawa kunye nokwenza uvavanyo lokucinezelwa ngokulayisha ukuya phezulu nasemaqobeni e-carton, de ibe kukuqhula, okanye ujonge ibhokisi ukuba yaphukile na okanye hayi, kwaye ufumane amandla okucinezelwa alungele imfuneko okanye hayi, kwaye unikezele ngamanani okuqokelelwa kwezinto zephakeji okanye usetyenziso olusebenzayo.
Lo matshini usebenzise i-Load Cell induction, bonisa ixabiso lokumelana kwiscreen emva kocazululo lwekhompyuter.
10 ± 3mm / imizuzu
gqibezela ± 0.5%
I-AC220 ± 10% / 800w
Ubunzima bebhodi enkulu
Umsebenzi wokubamba uxinzelelo
I-ISO2872, ISO2874, GB4857.4
4. Imigangatho: ISO2872<Package–Completion,full packing case during transportation—Compression testing>,ISO2874<Package–Completion,full packing case –The stacking testing by compression machine>and GB4857.4<The basic testing of packing case Compression testing method>.
5. Uqwalaselo : Ukulungelelaniswa kunye nenkqubo ethambileyo enokuthi ibonise ijika ngexesha lenkqubo yokuvavanya kwaye iyakwazi ukuyiprinta.
Isetyenziselwa ukulinganisa amandla oxinzelelo lweebhokisi, izikhongozeli, njlnjl. Inezixhobo ezi-4 ezichanekileyo zoMthwalo ukuze zifunyanwe. Iziphumo zovavanyo ziboniswa yikhompyuter.
1. Ukwamkelwa kweqonga leewindows, kwaye zonke izakhelo zepharamitha zinokuqhubekiswa kwibhokisi yencoko yababini, kwaye isebenza ngokulula;
2. Sebenzisa isikrini sokusebenza kunye; awudingi ukutshintshela isikrini;
3. Iilwimi ezintathu ngesiTshayina esiLula, isiTshayina esiqhelekileyo kunye nesiNgesi, isoftware ingatshintshwa ngokulula;
4. Iphethini yeengxelo zoVavanyo inokuthi ibe yeyakho; idatha yovavanyo inokuboniswa ngqo kwisikrini esikhulu;
5. Ukukhetha uguqulelo, indlela yokuthelekisa ngaxeshanye ukwenza inani lokuthelekisa idatha;
6. Ngeentlobo ngeentlobo zeyunithi zemilinganiselo, Ubungakanani be-Imperi kunye neMetriki ziyatshintshwa;
7. Ngomsebenzi wokubuyisa kunye nokuzihlaziya okuzenzekelayo;
8. Ngomsebenzi wokukhulisa ozenzekelayo, ukuze kufikelelwe kwelona lungelo lifanelekileyo kwimifanekiso;
9. Ngeendlela zovavanyo ezichazwe ngumsebenzisi; ngomsebenzi wovavanyo lokuvavanywa kwedatha;
10. Inokwenza uvavanyo lokucinezelwa, ukugoba, ukubamba uxinzelelo kunye nokudinwa.
11. Ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuchaneka kunye nexabiso elifanelekileyo, inokuvavanya ukuchopha ngokukhawuleza kwaye bayeke ngokuzenzekelayo.
inombolo yefowuni: 86-13799540670
Buyela kwiWebhu yethu yeWebhu →
Box ucinezelo Tester
Umvavanyi woQinisekiso lweBhokisi yoNyango
Umvavanyi wephepha lokuhanjiswa kwephepha kunye ne-erasa enamathela ...
Ukuxhathisa kwe-Abrasion kwezixhobo eziprintiweyo yiSut ...
Ikhadibhodi / iphepha I-Angle Cutter
Iphepha / ikhadibhodi iringi yokuqhekeza umhloli